China isi ísì ụtọ Manufacturer na Supplier | BGT
Odido Remover bụ usoro ọhụrụ nke deodorant nke nwere ike iwepụ ma wepụ isi nke CO2, SO2, nitrogen oxide exhaust gas (NOX), amonia (NH3) wdg.
Enwere ike iji ya na PP, PE, PVC, ABS, PS, Paint na Rubber.
Odido Removerbụ ụdị deodorant site na usoro nke absorption na mmeghachi omume ma nwekwaa ezigbo mgbasa. E jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ nke deodorant, ọ nwere ike iwepụ kpamkpam isi nke agba na PP, PE, PVC, ABS, PS plastic, roba, karịa iji isi ndị ọzọ na-ekpuchi.
Ọ nwere ike ike nke CO2, SO2, nitrogen oxide gas (NOX), amonia (NH3) karama pesticide, karama ịchọ mma, karama ihe ọ chemicalụ ,ụ, kemịkal kemịkal, ihe fọdụrụ, ma isi ísì plastik, roba, agba, ink, agba agaghi agbanwe.
Typesdị niile nke na-esote enweghị isi na-enweghị nsị na nke na-enweghị mkpali nke gafere SGS Asambodo.
Ihe ndị a bụ nkọwa zuru ezu nke ụdị nke ọ bụla:
Mere nke umi na isi usoro nke absorption. Ọ bụ ụdị zuru ezu maka iji ya mee ihe na plastik na-enweghị isi.
Eyi, Pee, HDPE, ịkwanyere, PS, PA, ABS, Eva, akpụkpọ ụkwụ ihe onwunwe, roba, agba, ink, agba wdg
0,1% - 0,3% maka plastik, 0.8% -1% maka ihe roba.
O nwere otu ọrụ dika BT-100A, mana onunu ogwu pere mpe.
0,05% - 0,1% maka plastik
O nwere otu ọrụ dika BT-100A maka iwepu isi ike.
Ọ dịkwa mma maka ngwa PVC dị nro.
0,1% - 0,2%, na-emekarị nanị tinye 0,1% anyị ezu.
Ọ bụ ịmụta teknụzụ dị elu nke mgbọrọgwụ meridian mmịpụta yana usoro kachasị ire ere.
A na-eji ya nke ọma na PP, PE na PVC dị nro.
Ọ bụ tumadi maka ịfụfụ nhazi nke egweri plastic.
Enwere ike iji ya na ịfụfụ nke PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA na roba.
A na-ejikarị ya eme ihe maka imepụta akpụkpọ ụkwụ.
Enwere ike iji ya na PP, PVC, PS, ABS na PC wdg.
A na-ejikarị ya eme ihe na roba.
Eyi, Pee, ịkwanyere, PS, PA, ABS na akpụkpọ ụkwụ ihe onwunwe.
Ọ nwere ike iwepu isi na-abịa site na plastik na njupụta nke French ọcha na calcium carbonate.
Eyi, Pee, ịkwanyere, ABS, PS na roba.
Nkwakọ ngwaahịa na nchekwa:
Odor remover bụ ntụ ntụ na 15KG na-juru n'ọnụ ke otu katọn na aluminum nkwakọ ngwaahịa n'ime. Ekwesiri ịchekwa ya na ebe dị ọcha, ventilated, ebe akọrọ na oge nchekwa nke ọnwa 12.
1. Ndị na-azụ ahịa kwesịrị ịhọrọ ụdị ahụ dịka nha nke ihe ahụ.
2.Anyị nwere ike iwepụ isi ọzọ nke na-ekwughi aha na katalọgụ a, ọ bụrụ na ịnweghị ike ikpebi ihe bụ isi, ị zigara anyị obere obere ihe, anyị nwere ike ịnwale ule na ụlọ nyocha anyị ma nyere gị aka ịme mkpebi ụdị enwere ike iji ya.
Dị ka ihe na-esi ísì ụtọ na-esiri ike ikpe ikpe ebe o si bịa, yabụ anyị ji obiọma rịọ ka anyị zitere anyị ihe nlele ahụ maka ule nyocha, ka anyị wee nwee ike ịme ụdị ahụ ngwa gi.
Nke gara aga: Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9803
Osote: Ngwa anya Brightener OB-1
Ntughari Odogwu Na-adighi Akpalite
Ihe na-egbu egbu na-adịghị egbu egbu
Odor Remover N'ihi Plastic
Odor Remover Of Pee
Odor Remover Of eyi
Odor Remover Of ịkwanyere